शुक्रवार १३ आस्विन, २०७४ | विचार र दृष्ट्रिकोण
१. चाडको महत्व
कुनै पनि चाडको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक महत्व हुन्छ । यस्ता चाडहरु कहि न कहि धर्म र राजनीतिसंग जोडिएको हुन्छ । चाडले समाजलाई बिशेष सन्देश दिएको हुन्छ र निश्चित मुल्य र मान्यतालाई बढावा दिएको हुन्छ र समाजलाई डोर्याइरहेको हुन्छ । चाडले खास मानव समुह या समाजको पहिचान पनि दिन्छ । कुनै पनि चाड कुनै न कुनै धर्म तथा धार्मिक विश्वाससंग गासिएको हुन्छ । त्यसले उक्त धार्मीक तथा सामाजिक विश्वासलाई मजबुत बनाउने काम गर्दछ । चाड मानव समुदायमा घटित कुनै न कुनै घट्नासंग जोडिएको हुन्छ । चाडहरुले कुनै पनि जातिय या सामाजिक या सांस्कृति समुहको संस्कृतिकोरुपमा पहिचान दिन्छ । यति मात्र होईन यसले ईतिहासमा मानव समुहहरु वीच भएको राजनीतिक घट्ना तथा नियन्त्रणको पनि रिफ्लेक्सन दिन्छ । यस अर्थ, चाडको बहुपक्षिय महत्व छ । सामान्य चाड मनाउने, रमाईलो गर्ने, मिठा मिठा खाने कुराहरु खाने र नया नया लुगा लगाउनेमा मात्र चाड सिमित हुदैन र छैन ।
२. दशै चाडको पक्ष र विपक्ष
२०४७ सालमा आएको प्रजातन्त्र पछि नेपालमा दशै चाडबारे विभिन्न बिचारहरु आउन थाले । यसले व्यक्ति तथा समुदायलाई दशै चाडको पक्ष र विपक्षमा रहनु पर्ने अवस्था ल्यायो । २०४७ सालको स्वतन्त्रताले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिकरुपमा थुनामा राखेको कैदी स्वतन्त्र भए जस्तो भयो यद्यपी २०४७ सालको संविधानले पनि धर्म तथा संस्कृतिको सवालमा उहि पुरानै पन्चायतकालिन बाटो लिएको थियो । सो समयदेखी आजसम्म दशै चाड मान्ने र नमान्ने पक्ष र विपक्षमा समाज बाडीएको छ । त्यसपछि दशै नेपालीहरुको महान चाडबाट हिन्दुहरुको महान चाडमा परिणत भयो । यस्तो पक्ष र विपक्षमा समाज बाडीनुमा मुख्य कारण दशैको शुरुवात कहिले र कोबाट भयो भन्ने कुरा भन्दा बढी २४० बर्षदेखी राज्य तथा राज्य शासकहरुले धर्म, जाति तथा संस्कृतिको आधारमा गरिएको फरक व्यवहार, असमानता र अन्याय थियो जुन नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितहरुले भोगेका थिए । तिनीहरु मध्ये आदिवासी जनजातिहरु भने नमान्ने तर्फ पहिलो पंक्तिमा रहे ।
दशै अनाजको चाड हो खास गरि धान तथा मकैको । धान आर्यहरु सिन्धु घाटीमा आउनु अघि सिन्धु सभ्यताको क्षेत्रमा खेती गरिन्थ्यो । त्यसैले, यो चाड आदिवासी किरातसंग सम्बन्धित छ ।
दशै चाडको विपक्षमा अर्को एउटा समुह पनि थियो र रहिआएको छ त्यो भनेको माक्र्सवादी बर्गिय बिचारको आधारमा राजनीति गर्नेहरु हुन । उनीहरुको मान्यता भनेको दशै भनेको शोषक तथा उत्पीडक बर्गका मानिसहरुले आफ्नो शोषण—उत्पीडन कायम राख्न चलाईएको प्रपन्च हो जस्ले गरिवहरुमाथी झन शोषण र अन्याय गर्दछ । यसैले, यो दशै चाड मनाउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने उनीहरुको बिचार हो ।
३. दशै चाडबारे विभिन्न मतहरु
दशै चाडबारे मुख्य मत त नमान्ने मत र अर्को मान्ने मत हो । नमान्नेहरुले दशै हाम्रो चाड होईन थोपरिएको हो । हाम्रा आफ्नै मौलिक चाडहरु छन् तिनीहरुलाई मानौ र मनाऔ भन्ने रहेको छ ।
मान्ने भित्र पनि २ वटा धार रहेको छ । पहिलो धारले दशैलाई बिजया दशमी अर्थात असत्यमाथी सत्यको बिजयको बिजय उत्सव मनाउने पर्वकोरुपमा चित्रण गर्दछ । यसैको व्याख्या असुर तथा रामणहरु असत्यका पक्षपाती थिए भने देवता तथा राम सत्यका पक्षपाती थिए । रामणलाई रामले मारेको र देवी दुर्गाले महिषासुर लगायतका असुरहरुलाई बध गरेको प्रतिक र उत्सवकोरुपमा दशैलाई चित्रण गर्ने गरिएको छ । यो पहिलो धारले हिन्दु दर्शन, हिन्दुत्व र हिन्दु सामाजिक, धार्मीक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक बिचारलाई प्रतिनिधीत्व गर्दछ । यहि हिन्दु दर्शन, हिन्दुत्व र हिन्दु सामाजिक, धार्मीक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक बिचार बोकेको दशै चाड अरु गैरहिन्दुहरुलाई राज्य तथा राज्यसत्ताको बलमा जबर्जस्त थोपरियो भन्ने दशै नमान्ने या मान्न छोड्नेहरुको बिचार छ ।
आदिवासी किरातहरुले मनाउने चाडलाई आर्यहरुले नक्कल गरे र उक्त चाड मनाउन शुरु गरे ।
दशै मान्नु पर्छ भन्ने अर्को धारले दशैको आदिवासी तथा किरातहरुको चाड हो भन्ने बिचार राख्दछ । यसमा आर्य हिन्दुहरुले आफ्ना कुराहरु जोडेर आफ्नो बनाएका हुन । त्यसैले, यसलाई नमान्नु भनेको किरात तथा आदिवासी जनजातिको संस्कृतिको अवज्ञा हो भन्ने बिचार रहेको छ । यो चाड आर्यहरुको होईन भन्ने यो धारको ६ वटा तर्कहरु रहेका छन् । पहिलो तर्क छ, यो अनाजको चाड हो खास गरि धान तथा मकैको । धान आर्यहरु सिन्धु घाटीमा आउनु अघि सिन्धु सभ्यताको क्षेत्रमा खेती गरिन्थ्यो । त्यसैले, यो चाड आदिवासी किरातसंग सम्बन्धित छ । दोस्रो तर्क छ, आदिवासी किरातहरुले मनाउने चाडलाई आर्यहरुले नक्कल गरे र उक्त चाड मनाउन शुरु गरे । तेस्रो तर्क छ, यो चाड ऋतुसंग सम्बन्धित भएकोले खेती कार्यहरु सके पछि दुखको काम सकियो भनेर खुशी मान्ने चाड हो ।
यसैले, यो कसैको बिरुद्ध या समर्थनमा छैन । चौथो तर्क छ, यस चाडमा देवी दुर्गाको पुजा गरिन्छ र शक्तिकोरुपमा लिईन्छ । दुर्गा भनेको स्त्रि जो मातृसत्तात्मक समाजको प्रतिक हो । आर्य समाज मातृसत्तात्मक थिएन त्यसैले यो मातृसत्ता भएका आदिवासी किरातहरुको चाड हो । पाचौ तर्क छ, आर्यहरुमा जात विभाजन छ । बाहुन र क्षेत्री मात्र आर्य हुन । बाकी बैश्य र शुत्र भनेका आर्यहरु यो भेकमा आएपछि अरुलाई आर्य हिन्दुमा मिसाउन अरु समुदायलाई हालिएको या जोडिएको हो । बैश्यहरु भनेका खेती र व्यापार गर्नेहरु हुन । आर्यहरु खेती नै नगर्ने भएकोले यो चाड आर्य हिन्दुहरुको होईन । छैटौ तर्क छ, दशै चाड नेपालमा जुन ढंगले मनाईन्छ अन्यतिर खास गरि भारतमा यसरी मनाईन्दैन । चामलको अक्षेत दहिमा मुसेर टिका लगाउने चलन नेपालमा मात्र छ । त्यसैले, यो आर्यहरुको नभएर आदिवासी किरातहरुको चाड हो ।
४. विश्लेषण र निश्कर्ष
माथीका मतहरुलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा, नमान्नेको तर्कमा धेरै थप कुरा गरिरहन परेन किन भने थोपरिएको भन्ने कुराको लागी प्रशस्त प्रमाणहरु छन् । नमान्ने र नमानौ भन्ने अभियान गर्नेहरु मारिएका छन् भने दशै माने कि मानेनन भनेर हेर्ने अनेक प्रमाणहरु राख्न लगाईने र राज्यका मानिसहरु आएर चेक गर्नेसम्मका उदाहरणहरु काफी छन् । यस्ता अवस्थाबाट गुज्रेका दशै नमान्नेहरुलाई दशैको शुरुवात कसरी भयो र कस्तो चाड हो भन्ने कुरा अर्थ हुदैन । जहासम्म दशै चाड आदिवासी तथा किरातहरुको हो भन्ने मत तथा तर्कहरु छन् तिनीहरुलाई भने सिलसिलेवाररुपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
दशै ऋतुसंग सम्बन्धित भएकोले खेती कार्यहरु सके पछि दुखको काम सकियो भनेर खुशी मान्ने चाड हो ।
अनाजको चाड हो भन्ने कुरामा धेरै गलफत्ति गरिरहनु परेन, हुन पनि सक्छ । अनाजको चाड त नेपालका किरातहरुले मनाउने उभौली अर्थात चासोक हो । चासोक भनेको नै अन्न वाली पाकेपछि प्रकृती तथा माङहरुलाई चढाउने चाड हो । यो चाडमा धानको अक्षेता दहिसंग मुछेर निधारमा लगाईदैन । दशैमा आदिवासी किरातले सेतो टिका लगाएको त दशै थोपरिएकोले गर्दा हो । थोपरिए पछि भिन्न देखाउन रातो नलगाएर सेतो लगाएको हो ।
धान खेती या धानको आविष्कार ५ हजार बर्ष (ईसापुर्व) चिनमा भएको हो । त्यो बिस्तारै फैलदै हालको थाईल्याण्ड, कम्बोडिया, भियतनाम, बर्मा हुदै उत्तर—पुर्व भारत, आसाम र नेपाल अनि गंगाको मैदानमा आएको हो । गंगाको मैदानबाट सिन्धु सभ्यताको मैदानमा गएको समय शायद ईसा पुर्व ३,००० बर्षतिरै होला । के कुरा सत्य हो भने आर्यहरु सिन्धु घाटीमा आउनु अघाडी नै सिन्धु मैदानमा धान लगाउने प्रचलन चलिसकेको थियो । आर्यहरु सिन्धु मैदानमा आएपछि कृषी खेती गर्न थालेको कुरा त उनीहरुको ऋगवेदमा र धानको कुरा यजुरवेदमा नै उल्लेख छ । उनीहरु आउनु अघि आदिवासी द्रावीड र किरातहरुले दशै मनाउथे भन्ने कुरा अलि प्रमाणीत हुदैन । शायद ति आदिवासीहरुले नेपालका किरातले अन्न पाकेपछि प्रकृति र देवी देउता (माङहरु) लाई चढाउथे र घर घरमा पुजा गर्थे होला भनेर अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।
आर्य भनेको मातृसत्तात्मक समाज कहिल्यै रहेन भन्ने कुरा सही नै हो । देवी दुर्गा भनेको मातृसत्तात्मक समाजको संकेत तथा प्रतिक हो । त्यसैले, दशैमा पुजा गरिने दुर्गा स्त्रि भएकोले दशै आर्य हिन्दुहरुको चाड होइन भन्ने तर्क केही हद ठिकै भए पनि पुर्णरुपमा ठिक होईन । स्त्रिरुपका स्वरस्वती, लक्ष्मी आदी पनि छन् । ति सबैलाई मातृसत्तात्मक समाजको संकेत भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ । दुर्गा भनेको आर्य हिन्दु समाजकै महिला भए पनि उनलाई कामबासना पुरा गर्न पठाई शक्तिशाली असुरहरुलाई छलकासाथ बध गरेको भन्ने कथा पनि रहेको छ । त्यस्ता शक्तिशाली असुरहरुलाई बध गरि आर्य हिन्दुहरुको बर्चस्प स्थापित गर्ने दुर्गाको जयजयकार गर्नु आर्य हिन्दु पितृसत्तात्मक समाज नै भए पनि अस्वभाविक होईन । त्यसैले, दुर्गाको पुजा हुने र स्त्रि भएकै आधारमा दशै आदिवासी किरातहरुको हो भन्न मिल्दैन ।
दशै आदिवासी तथा किरातहरुको हो भनेर जिकीर गर्नु मुर्खता मात्र हो ।
आर्यहरुमा बर्ण या जात विभाजन रहेको, बाहुन र क्षेत्री आर्य बाकी बैस्य र दलित गैरआर्य भन्ने तर्क ठिकै हो । भारतमा आर्यहरुले आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्ने क्रममा अन्य धेरै जाति तथा बर्णका समुदायसंग मुकाविला गर्न पर्यो । ति फरक जाति तथा बर्णका मानव समुहलाई आफ्नो आधिपत्य भित्र ल्याउन र राख्न बर्ण विभाजन गरियो । बैस्यको श्रेणीमा रहनेहरु कृषी खेती तथा व्यापार गर्दथे भन्ने कुरा सही नै हो । बैस्यले कृषी खेती गर्ने भन्दैमा अनाजको चाड भनिएको दशै बैस्यमा राखिएका आदिवासी तथा किरातहरुको चाड हो भन्ने हुन सकदैन । बर्ण विभाजन भएको मनुस्मृतिको पालामा हो । मनुको समय ईसापुर्व ३ शताव्दी हो । त्यो भन्दा अघि नै आर्यहरु गंगा तथा सिन्धु मैदानमा कृषी खेती गर्दथे र गर्दैआईरहेका थिए । यसर्थ, यो खाले तर्कले दशै आदिवासी तथा किरातहरुको चाड हो भन्ने पुष्ठी हुदैन ।
नेपालमा जस्तो तरिकाले भारतमा दशै मनाइन्दैन भन्ने कुरा ठिक हो । नेपालमा आदिवासी तथा किरातहरुले त न्वागी अर्थात चासोक पुजा मात्र गर्ने गर्दथिए । आर्य हिन्दुहरुले दुर्गा देवीको पुजा अर्चना भारत लगायत अन्य ठाउमा गर्ने गर्दथिए । भारतमा भनिने दशेरालाई नेपालमा असली हिन्दुस्थान बनाउने उदेश्यकासाथ गोर्खा राज्यको बिस्तार पछिको नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले भारत भन्दा भिन्न ढंगले कसरी मनाउने भन्ने सोचको उपज हो नेपालको दशै चाड । एउटा कुरा के नकार्न मिल्दैन भने दशैमा प्रयोग गरिने विधी तथा तरिकाहरु कतिपय आदिवासी समाजको विधी तथा तरिकालाई लिईएको या मिसाईएको छ । यसैले, नेपाल र भारतमा मनाईने दशेरा या दशैमा भिन्नता छ । यत्तिको आधारमा दशैलाई अदिवासी तथा किरातको चाड हो भन्न मिल्दैन ।
दशैमा अन्न र फुलपाती घरमा भित्र्याउने विधी तथा तरिका आदिवासी तथा किरातहरुको भए पनि समग्रतामा दशै आर्य हिन्दु दर्शन, बिचार तथा राजनीतिमा आधारित छ । यसर्थमा पनि दशै आदिवासी तथा किरातहरुको हो भनेर जिकीर गर्नु मुर्खता मात्र हो ।